नेपाल एयरलाईन्सले पहिलोपटक भित्र्याएको वाइडबडीमा यस्तो विशेषता !
June 30, 2018 Spnews Comments Off on नेपाल एयरलाईन्सले पहिलोपटक भित्र्याएको वाइडबडीमा यस्तो विशेषता !
काठमाडौं । नेपाल एयरलाईन्सले पहिलोपटक वाइडबडी विमान नेपाल भित्र्याएको छ । एयरलाईन्सले ‘ए ३३०–२००’ सिरिजको विमान बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । नयाँ विमानलाई ‘अन्नपूर्ण’ नाम दिइएको छ । अन्नपूर्णले आगामी अगस्ट […]
मृत्यु भइसकेपछि ३.७५ जीपीए आयो, परीक्षा बोर्डको चरम लापरवाही, नतिजा बी आएपछि आत्माहत्या
June 30, 2018 Spnews Comments Off on मृत्यु भइसकेपछि ३.७५ जीपीए आयो, परीक्षा बोर्डको चरम लापरवाही, नतिजा बी आएपछि आत्माहत्या
इटहरी: एसईईमा ‘ए-प्लस’को नतिजालाई राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले ‘बी ग्रेड’मा झारिदिएपछि झापाकी एक छात्रा मृत्यु रोज्न विवश भएकी छन् । बोर्डको चरम लापरवाही उनको मृत्युको कारण बनेको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी सलिना ढकालले बिर्तामोडस्थित वाल्मिकी एजुकेसन […]
अर्जेन्टिनाको हारमा नेपाली फ्यानको रुवाबासी (भिडियो)
June 30, 2018 Spnews Comments Off on अर्जेन्टिनाको हारमा नेपाली फ्यानको रुवाबासी (भिडियो)
बिश्वकप उचाल्ने सपना सहित रसिया पुगेको अर्जेन्टिनाको सपना फ्रान्सले चकनाचुर बनाए पछि नेपाली फ्यानहरुको रुवाबासी चलेको छ । अन्तिम ८ को लागी भएको प्रतिष्प्रर्धामा अर्जेन्टिना फ्रान्ससंग ४–३ ले पराजित भयो । पराजित भएसंगै अर्जेन्टिना घर […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार १७ गते, आईतबार
June 30, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार १७ गते, आईतबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कामकै सन्द्रर्भमा समाजका बिशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुँनाले घर परिवार तथा आफन्तहरु खुसि हुनेछन् । व्यापार व्यावसायमा समय दिनेहरुले मनग्गे आम्दानि गर्न सक्नेछन् भने नयाँ […]
अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरियो : फ्रान्ससँग ४–३ ले पराजित, मेस्सिको करियरमा लाग्यो ठुलो धक्का
June 30, 2018 Spnews Comments Off on अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरियो : फ्रान्ससँग ४–३ ले पराजित, मेस्सिको करियरमा लाग्यो ठुलो धक्का
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप आजको खेलमा अर्जेन्टिनाको ३ गोल र फ्रान्सको ४ भएको छ। अर्जेन्टिनाको एंजेल डी मारियाले ४१ औँ मिनेटमा एक गोल गरेका थिए , भने अर्को गोल गेब्रियल मर्काडोले ४८ औँ मिनेटमा गरेको हो। फ्रान्सको एंटोनी ग्रिज़मानले […]
अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले गरे ४ गोल, के अर्जेन्टिना नकआउट हुने नै हुन् ?
June 30, 2018 Spnews Comments Off on अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले गरे ४ गोल, के अर्जेन्टिना नकआउट हुने नै हुन् ?
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप आजबाट प्रिक्वाटरफाइनलका खेल भइरहेको छ । खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले ४ गोल गरेका छन् । फ्रान्सको क्यालियन म्बप्पेले ६८ र ६४ औँ मिनेटमा गोल गर्न सफल भएको हो। अर्जेन्टिनाको एंजेल डी मारियाले ४१ औँ मिनेटमा एक […]
अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सको चार गोल, ४ – २ को खेल जारि
June 30, 2018 Spnews Comments Off on अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सको चार गोल, ४ – २ को खेल जारि
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप आजबाट प्रिक्वाटरफाइनलका खेल भएको छ । खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले ४ गोल गरेका छन् । र फ्रान्स ४ गोल र अर्जेन्टिना २ गोल मा खेल जारि छ । अर्जेन्टिनाको एंजेल डी मारियाले ४१ औँ मिनेटमा एक गोल […]
फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेलमा गोलको वर्षा, २-२ को बराबरीमा खेल जारि
June 30, 2018 Spnews Comments Off on फ्रान्स र अर्जेन्टिना खेलमा गोलको वर्षा, २-२ को बराबरीमा खेल जारि
काठमाडौं । रुसमा जारि विश्वकप अन्तर्गत अर्जेन्टिना र फ्रान्सको खेलसँगै नकआउट चरणका खेलको दोश्रो हाप सुरु भएका छन् । पौने आठबाट सुरु भएको खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्व फ्रान्सका खेलाडी एन्टोनी ग्रिजम्यानले १२ औं मिनेटमा गोल गर्दै सुरुवाती […]
अर्जेन्टिनाले फ्रान्समाथि गोल फर्कायो, १-१ को बराबरीमा खेल जारि (लाइभ हेर्नुस)
June 30, 2018 Spnews Comments Off on अर्जेन्टिनाले फ्रान्समाथि गोल फर्कायो, १-१ को बराबरीमा खेल जारि (लाइभ हेर्नुस)
काठमाडौं । रुसमा जारि विश्वकप अन्तर्गत अर्जेन्टिना र फ्रान्सको खेलसँगै नकआउट चरणका खेल सुरु भएका छन् । पौने आठबाट सुरु भएको खेलमा अर्जेन्टिनाविरुद्व फ्रान्सले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता लिएको छ । फ्रान्सका खेलाडी एन्टोनी ग्रिजम्यानले […]